ပြန်ဆုံဖြစ်ခဲ့ရင် (ဇာတ်သိမ်းပိုင်း) - For her Myanmar
ကိုလုပ်ခဲ့တာတွေ အားလုံးအတွက် ထား ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ထား သေရမှာ မကြောက်ပါဘူး။ ကိုနဲ့ ခွဲရမှာပဲကြောက်တာ
နောက်နေ့မနက်တွင် သူ အစောကြီး အိပ်ရာမှ နိုးနေသည်။ နိုးနိုးချင်း သူ့ဘေးရှိ ထားနေရာကို စမ်းကြည့်တော့ သူ့ဘေးတွင် ထား မရှိတော့သောကြောင့် လန့်သွားသည်။ သူတို့ ပြန်လည်ဆုံတွေ့ခဲ့ခြင်းသည် အိပ်မက်တစ်ခုဖြစ်နေမှာကို သူ ကြောက်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ထား ကို အကျယ်ကြီး အော်ခေါ်လိုက်သည်။
တိတ်ဆိတ်နေသော ပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့် သူ့အသံသည် ကျယ်လောင်စွာ ဟိန်းထွက်နေပါသည်။
“လာပြီ ကို။ ထား လာပြီ။”
ထားသည် ပြောရင်းဆိုရင်း အပြေးတစ်ပိုင်းဖြင့် သူ ရှိရာအိပ်ခန်းထဲသို့ ပြေးလာပါသည်။
“ဘာဖြစ်လို့လဲ ကို။ အိပ်မက်ဆိုးတွေမက်လို့လား။”
“မဟုတ်ဘူးထား။ ကို နိုးတော့ ထားကို ကို့ဘေးမှာ မတွေ့ရတော့လို့။”
“သြော် ကို ရယ်… ဒီအချိန်ဆို ထား အိပ်ရာထချိန်ရောက်ပြီလေ။”
“ဟင်… ဒီလောက်အစောကြီး ဘာထလုပ်တာလဲ ထား။”
“မစောတော့ပါဘူး ကို ရဲ့။ ဒီအချိန်ထမှ ကို့အတွက် မနက်စာရယ်၊ ရုံးအတွက် ထမင်းချိုင့်ရယ် မီမှာပေါ့။”
“ထနေကျဆိုတော့လည်း မပင်ပန်းပါဘူး ကိုရယ်။ လင်ယောက်ျားကို ပြုစုခွင့်ရတာ ထား အတွက်ကုသိုလ်တောင်ရပါတယ်။”
ထား စကား ကြားတော့ သူပြုံးမိပါသည်။
Related article>>>ပြန်ဆုံဖြစ်ခဲ့ရင်…. (အပိုင်း -၁၁)
“အဲ့ဒါ ဘယ်သူပြောတာလဲ ထား။”
ထား အဖြေကြောင့် သူ မရယ်ရက်တော့ပါ။ သားကိုသခင် လင်ကို ဘုရားဆိုသည့်ခေတ်အဆက်ဆက်က သွန်သင်စကားအောက်မှ မြန်မာမိန်းကလေး များ ရုန်းထွက်ဖို့ရန် တော်တော်လေးခက်ခဲနေပါဦးမည်။
“မနက်ဖြန်ကျ ထား အစောကြီးမထနဲ့တော့နော်။ ကို ဟင်းချက်ကျွေးမယ်။”
“ဖြစ်ပါ့မလား ကို ရဲ့။ ကို မီးဖိုခန်းထဲမဝင်တာ ဘယ်လောက်ကြာနေပြီလဲ ဆိုတာ သိရဲ့လား။”
“ဖြစ်ပါတယ်။ လိုတာရှိရင် ထားကပြောပေးပေါ့။”
“ကို့သဘောပါတဲ့ရှင်။ ထားတို့ ဘယ်အချိန်လောက် သွားကြမလဲဟင်။”
“ခဏနေရင် မနက်စာကို အပြင်မှာ စားပြီးတော့ပဲသွားကြတာပေါ့။ ထမင်း ဟင်းတွေကရော ထား ချက်ပြီးပြီလား။”
“ဟင့်အင်း။ ဘုန်းကြီးဆွမ်းအတွက်ပဲ ရသေးတယ်။”
“အဲ့ဒါဆို မချက်နဲ့တော့နော် ကို တို့အပြင်မှာပဲစားကြတာပေါ့။”
“ပိုက်ဆံကုန်တယ်ဆိုပြီး နှမြောဦးမလို့လား ဒေါ်မိမိထား။”
ထား အသံလေးသည် တိမ်ဝင်သွားပါသည်။
“ဘုန်းကြီးတွေကြွပြီးရင် ကိုတို့လည်း သွားမယ်နော်။ အဆင်သင့်လုပ်ထားနော် ထား။”
“ထားက ရေတောင်ချိုးပြီးပြီ။ ကိုပဲကျန်တော့တာ။”
သူ အိပ်ရာထ၊ ရေမိုးချိုးပြီးတော့ ဘုန်းကြီးများ ဆွမ်းခံကြွအပြီးနှင့် ကွက်တိပင်။ ထို့ကြောင့် ထား လှူဒါန်းလိုသည့် မိဘမဲ့ကျောင်းရှိရာဆီသို့ စောစောပင် သွားဖြစ်ခဲ့သည်။ ဟိုရောက်တော့ ကလေးတွေ ပညာရေးအတွက် အဓိကထားပြီး လှူဖြစ်ခဲ့သည်။
“ကို… ထား ကို ဓာတ်ပုံရိုက်ပေးဦး။”
“အင်း။ ကို လှလှလေး ရိုက်ပေးမယ်။”
ထား သည် ကလေးများနှင့် ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ပင် ကစားနေသည်။ ဘာမှ မသိနားမလည်သေးသည့် ကလေးများနှင့်အပြိုင် အပူအပင်ကင်းနေပါရောလား ထားရယ်။
နေ့လယ်ထမင်းစားချိန်ကျတော့ ကျောင်းထိုင်ဆရာတော်က သူတို့ကိုပါ ထမင်းလာစားဖို့ခေါ်ပေမဲ့ နောက်တစ်နေရာ သွားရန်ရှိသည့်အတွက် သူတို့ ငြင်းလိုက်ပြီး အပြင်မှာပဲ ထမင်းစားကာ ဆေးရုံသို့ သွားလိုက်သည်။ ဆေးရုံရောက်တော့ ကျန်းမာရေးအတွက် လိုအပ်သည်များ ဝယ်ရန်နှင့် ဆေးရုံရှိ နွမ်းပါးလူနာများအတွက် လိုအပ်သလို အသုံးပြုနိုင်ရန် လှူလိုက်သည်။
မိဘမဲ့ကျောင်းရော ဆေးရုံမှာရော နှစ်နေရာလုံးတွင် ထား၏ မျက်နှာသည် ကြည်လင်လျက်ရှိပြီး အင်မတန်ပင် ချောမောလှပနေပါသည်။
“မေမေတို့ဆီကိုတော့ မနက်ဖြန်မှ ဘဏ်ကနေပဲ လွှဲလိုက်တော့မယ်။ ကိုယ်တိုင်တော့ မသွားနိုင်တော့ဘူး။”
“ထား သွားချင်တယ်ဆိုရင် ကို လိုက်ပို့ပေးမယ်လေ။”
“ဟင့်အင်း။ ထား အနားမှာ ကိုရှိနေတုန်းလေး နှစ်ယောက်တည်း အေးအေးဆေးဆေးပဲ နေချင်တယ် ကို။”
“ဟုတ်ပါပြီတဲ့ဗျာ။ ကိုလည်း ထားနှင့်အတူ နှစ်ယောက်တည်းပဲ အေးအေးဆေးဆေး နေချင်ပါတယ်။”
၇ ရက်ဆိုသော အချိန်သည် သူ့အတွက် တိုတောင်းပြီး လျှင်မြန်စွာ ကုန်ဆုံးသွားပါသည်။ ပျော်ရွှင်စရာ နေ့ရက်တွေကို အတူဖြတ်သန်းပြီးချိန်မှာတော့ သူ မရောက်ချင်သည့် တနင်္ဂနွေနေ့သည် သူ့ဆီသို့ ဆိုက်ဆိုက်မြိုက်မြိုက်ပင် ရောက်လာတော့သည်။
ဟုတ်သည်။ ဒီနေ့ တနင်္ဂနွေနေ့သည် ထား ကွယ်လွန်ခဲ့သည့်နေ့ပင်ဖြစ်သည်။ မနက် ဟင်းချက်ဖို့ မီးဖိုခန်းထဲ ဝင်တော့ ငိုနေသောထားကိုတွေ့ပြီး ချော့ရသည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုသည့် အကြောင်းရင်းကိုတော့ မေးမရခဲ့။
အငိုတိတ်သွားပေမဲ့လည်း ထား မျက်နှာမကောင်းပေ။ ဓားရှလို့လားဆိုသည့်
မေးခွန်းကိုတော့ ထား မဖြေဘဲ ရယ်သည်။
“ဓားရှတာလေးနဲ့တော့ ငိုစရာလား ကိုရယ်။”
“အဲ့ဒါဆို ဘာလို့ငိုနေတာလဲ ထား။”
ဘုန်းကြီးများ ဆွမ်းခံကြွပြီဖြစ်သောကြောင့် စကားစပြတ်သွားခဲ့သည်။
“ကို… ထား နှင့်အတူ အခန်းထဲ ခဏလိုက်ခဲ့ပါလား”
Related article>>> ပြန်ဆုံဖြစ်ခဲ့ရင်…. (အပိုင်း – ၂)
အိမ်ပေါ်ပြန်ရောက်ရောက်ချင်းမှာပင် ထား သည် အခန်းထဲလိုက်ဖို့ သူ့ကို ပြောပြီး အခန်းထဲ ဝင်သွားသည်။ ထား တစ်ခုခု ဖြစ်နေပြီဖြစ်ကြောင်းလည်း သူသတိထားမိသည်။ ဟိုကိစ္စသိသွားတာလားဆိုတာလည်း စဉ်းစားမိသည်။ သို့သော် မသိနိုင်လောက်ပါပေ။
“ကို… ထားပြောတာ သေချာနားထောင်နော်။ အခုတော့ ကုတင်ပေါ်မှာ ခဏလာလှဲ။ ထား ကို့ရင်ခွင်ထဲမှာ ခဏခိုဝင်ချင်လို့။ နောက်ဆုံးအဖြစ်ပေါ့ ကိုရယ်။”
“ထား ဘာတွေပြောနေတာလဲဆိုတာ ကို နားမလည်ဘူး။”
ပါးစပ်ကပြောရင်း လူကတော့ ထား ပြောသည့်အတိုင်း ကုတင်ပေါ်ဝင်လှဲ လိုက်ပါသည်။
“ရူးချင်ယောင်ဆောင်ပြီး ထား ကို မကွယ်ဝှက်ထားပါနဲ့ ကို။ ဒီကိစ္စတွေ အားလုံးကို ထား သိပါတယ်။”
“ဟိုနေ့က ဗီရိုရှင်းရင်းနဲ့ အမှတ်မထင် ကို့ ဒိုင်ယာရီ စာအုပ်ကို ဖတ်မိလို့ သိသွားတယ် ကို။ ကို မသိဘဲ ဖတ်မိတဲ့အတွက်တော့ ထား တောင်းပန်ပါတယ်။”
“ဆောရီးပါထားရယ်…။ ထားကို ဘယ်လောက်ထိ ချစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း ကို ပြောချင်သေးလို့ပါ။”
“ကိုလုပ်ခဲ့တာတွေ အားလုံးအတွက် ထား ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ထား သေရမှာ မကြောက်ပါဘူး။ ကိုနဲ့ ခွဲရမှာပဲကြောက်တာ။”
“ခွဲရလည်း ခဏပေါ့ထားရယ်။ ကို့ကို ခဏပဲစောင့်နော်။ ထား နောက်က ကို လိုက်လာခဲ့မှာပါ။”
“မိုက်ရူးရဲဆန်တဲ့ သတ်သေခြင်းမျိုးတော့ ကို မလုပ်ရဘူးနော်။ ထား ထက် နိုင်ငံတော်က ပိုအရေးကြီးပါတယ် ကို။ ထား မရှိတော့တဲ့အချိန်မှာ နိုင်ငံတော်အတွက်ကို ပိုပြီး အချိန်ပေးပါ။ ကို့ကို သဘောကျတဲ့ မိန်းကလေးပေါ်လာခဲ့ရင် လက်ထပ်လိုက်ပြီး တစ်အိုးတစ်အိမ်ထူထောင်ပါ။ ထား သဘောတူပါတယ်။ ကို့ကို ပြုစုပေးနိုင်မယ့် မိန်းကလေးတစ်ယောက်တော့ မဖြစ်မနေ လိုအပ်တယ် ကိုရဲ့။”
“ထားရယ်… ထား ပြောသမျှအားလုံးလိုက်နာဖို့ ကို ကတိပေးပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ နောက်အိမ်ထောင်တော့ မပြုပါရစေနဲ့။ ကို့ နှလုံးသားထဲမှာ ထား က ဆက်လက်ရှင်သန်နေမှာပါ။”
“ထား ယုံပါတယ် ကို ရယ်။ နောက်ပြီး ကောင်းကောင်းနေခဲ့နော်။ ကို့ကို နိုင်ငံတော်က လိုအပ်နေသေးတယ်ဆိုတာ ကို ဘယ်တော့မှ မမေ့နဲ့နော်။”
“အဲ့ဒါဆို ထား ကိုစောင်ခြုံပေးခဲ့ပြီး ကို ထွက်တော့နော်။ ထား ခဏ အိပ်လိုက်ဦးမယ်။”
ထား ရဲ့ အိပ်စက်ခြင်းကို သူ အနှောင့်အယှက် မပြုချင်တော့သောကြောင့် သူ ခေါင်းညိမ့်ပြကာ စောင်ခြုံပေးလိုက်သည်။ လူကတော့ အပြင်မထွက်ဘဲ ထား နားမှာပဲ ဆက်ထိုင်နေလိုက်သည်။ သူ အပြင်ရောက်နေတုန်း ထား ကွယ်လွန်သွားခဲ့ ရင်ဆိုသည့် အသိစိတ်က သူ့ကို ခြောက်လှန့်လို့နေပါသည်။
ထားသည် အသက်ကို ဖြေးညှင်းစွာ ရှုရှိုက်နေကြောင်း ထား ၏ နိမ့်ချည်မြင့်ချည် ဖြစ်နေသော ရင်အစုံကို ကြည့်ရင်း သိသာနိုင်ပါတယ်။ မျက်လုံးများကတော့ မှိတ်ထားပါသည်။
ကြည့်နေရင်း ကြည့်နေရင်းဖြင့်ပင် ထား လက်ချောင်းလေးများ၊ ခြေချောင်း လေးများမှ သွေးတို့သည် နောက်ပြန်ဆုတ်သွားကာ တဖြေးဖြေး ဖြူလာသည်။ ထို့နောက်တွင်တော့ ထား ၏ ရင်အစုံသည် လုံးဝရပ်သွားပါတော့သည်။ မျက်နှာလေးသည်ကား ပကတိ အိပ်နေသည့်အတိုင်းပင်။ ထား နှုတ်ခမ်းတို့သည်ကား အနည်းငယ် ပြုံးနေသယောင်ပဲ ရှိသေးသည်ဟုထင်ရသည်။
Related article>>>ပြန်ဆုံဖြစ်ခဲ့ရင်… (အပိုင်း -၁၂)
ထားကို သဂြိုဟ်သည့်နေ့က သူငယ်ချင်းတွေ လူကြီး မိဘတွေရှေ့မှာ သူမငိုမိအောင် အားတင်းထားရပါသည်။ အားလုံးက ငိုချလိုက်ဖို့ပြောနေပေမဲ့လည်း သူ မငိုမိ။ ထား သည် သူ့နှလုံးသားထဲမှာ ရှင်သန်နေဦးမှာလေ။ သူ ငိုဖို့မှမလိုအပ်တာ ဆိုပြီး အားတင်းပါသည်။ လက်သီးကိုတော့ ကျစ်ကျစ်ပါအောင် ဆုပ်ထားပါသည်။
ဘယ်သူဘာထင်ထင် သူဂရုမစိုက်ပါ။ ချစ်သူဘဝမှာရော၊ အကြင်လင်မယားဘဝမှာပါ သူ့ကို မိခင်တစ်ယောက်လို ဂရုစိုက် ပြုစုယုယပေးခဲ့တဲ့ ကျေးဇူးတွေအတွက်၊ သူ လုပ်ခဲ့တဲ့ အမှားတွေအတွက် ထားရဲ့ ရုပ်အလောင်းကို သူ ထိုင်ကန်တော့မိခဲ့သည်။ ဘယ်သူဘာပြောပြော သူဂရုမစိုက်နိုင်တော့ပါ။
ထားကို မီးသဂြိုဟ်ချိန်မှာတော့ အဆောင်အပြင်ကို သူ ထွက်ထိုင်နေမိသည်။ ခဏနေတော့ မီးခိုးခေါင်တိုင်မှ ထား အငွေ့အသက်များသည် မိုးကောင်းကင်သို့ မြင့်တက်သွားသည်ကို သူတွေ့လိုက်ရတော့ လက်ပြကာ နှုတ်ဆက်စကား ဆိုလိုက်သည်။
“သွားနှင့်တော့ ထား ရယ်။ ကို သိပ်မကြာခင် ထား နောက်လိုက်လာခဲ့ပါမယ်။ ကို တို့တွေ နောက်ဘုံဘဝတစ်ခုမှာ ပြန်ဆုံပြီး နောက်ထပ်တစ်ခါ ချစ်ကြရအောင် နော်။ ကိုတို့တွေ ပြန်ဆုံဖြစ်ခဲ့ကြရင်ပေါ့ အချစ်ရယ်….”
မိုကျရူးရဲဆနျတဲ့ သတျသခွေငျးမြိုးတော့ ကို မလုပျရဘူးနျော။
နောကျနမေ့နကျတှငျ သူ အစောကွီး အိပျရာမှ နိုးနသေညျ။ နိုးနိုးခငျြး သူ့ဘေးရှိ ထားနရောကို စမျးကွညျ့တော့ သူ့ဘေးတှငျ ထား မရှိတော့သောကွောငျ့ လနျ့သှားသညျ။ သူတို့ ပွနျလညျဆုံတှခေဲ့ခွငျးသညျ အိပျမကျတဈခုဖွဈနမှောကို သူ ကွောကျပါသညျ။ ထို့ကွောငျ့ ထား ကို အကယျြကွီး အျောချေါလိုကျသညျ။
တိတျဆိတျနသေော ပတျဝနျးကငျြကွောငျ့ သူ့အသံသညျ ကယျြလောငျစှာ ဟိနျးထှကျနပေါသညျ။“လာပွီ ကို။ ထား လာပွီ။”
ထားသညျ ပွောရငျးဆိုရငျး အပွေးတဈပိုငျးဖွငျ့ သူ ရှိရာအိပျခနျးထဲသို့ ပွေး လာပါသညျ။
“ဘာဖွဈလို့လဲ ကို။ အိပျမကျဆိုးတှမေကျလို့လား။”
“မဟုတျဘူးထား။ ကို နိုးတော့ ထားကို ကို့ဘေးမှာ မတှရေ့တော့လို့။”
“သွျော ကို ရယျ… ဒီအခြိနျဆို ထား အိပျရာထခြိနျရောကျပွီလေ။”
“ဟငျ… ဒီလောကျအစောကွီး ဘာထလုပျတာလဲ ထား။”
“မစောတော့ပါဘူး ကို ရဲ့။ ဒီအခြိနျထမှ ကို့အတှကျ မနကျစာရယျ၊ ရုံးအတှကျ ထမငျးခြိုငျ့ရယျ မီမှာပေါ့။”
“ထနကေဆြိုတော့လညျး မပငျပနျးပါဘူး ကိုရယျ။ လငျယောကျြားကို ပွုစုခှငျ့ရတာ ထား အတှကျကုသိုလျတောငျရပါတယျ။”
ထား စကား ကွားတော့ သူပွုံးမိပါသညျ။
Related article>>>ပွနျဆုံဖွဈခဲ့ရငျ…. (အပိုငျး -၁၁)
“အဲ့ဒါ ဘယျသူပွောတာလဲ ထား။”
ထား အဖွကွေောငျ့ သူ မရယျရကျတော့ပါ။ သားကိုသခငျ လငျကို ဘုရားဆိုသညျ့ခတျေအဆကျဆကျက သှနျသငျစကားအောကျမှ မွနျမာမိနျးကလေး မြား ရုနျးထှကျဖို့ရနျ တျောတျောလေးခကျခဲနပေါဦးမညျ။
“မနကျဖွနျကြ ထား အစောကွီးမထနဲ့တော့နျော။ ကို ဟငျးခကျြကြှေးမယျ။”
“ဖွဈပါ့မလား ကို ရဲ့။ ကို မီးဖိုခနျးထဲမဝငျတာ ဘယျလောကျကွာနပွေီလဲ ဆိုတာ သိရဲ့လား။”
“ဖွဈပါတယျ။ လိုတာရှိရငျ ထားကပွောပေးပေါ့။”
“ကို့သဘောပါတဲ့ရှငျ။ ထားတို့ ဘယျအခြိနျလောကျ သှားကွမလဲဟငျ။”
“ခဏနရေငျ မနကျစာကို အပွငျမှာ စားပွီးတော့ပဲသှားကွတာပေါ့။ ထမငျး ဟငျးတှကေရော ထား ခကျြပွီးပွီလား။”
“ဟငျ့အငျး။ ဘုနျးကွီးဆှမျးအတှကျပဲ ရသေးတယျ။”
“အဲ့ဒါဆို မခကျြနဲ့တော့နျော ကို တို့အပွငျမှာပဲစားကွတာပေါ့။”
“ပိုကျဆံကုနျတယျဆိုပွီး နှမွောဦးမလို့လား ဒျေါမိမိထား။”
“မဟုတျပါဘူး။”ထား အသံလေးသညျ တိမျဝငျသှားပါသညျ။
“ဘုနျးကွီးတှကွှေပွီးရငျ ကိုတို့လညျး သှားမယျနျော။ အဆငျသငျ့လုပျထားနျော ထား။”
“ထားက ရတေောငျခြိုးပွီးပွီ။ ကိုပဲကနျြတော့တာ။”
သူ အိပျရာထ၊ ရမေိုးခြိုးပွီးတော့ ဘုနျးကွီးမြား ဆှမျးခံကွှအပွီးနှငျ့ ကှကျတိပငျ။ ထို့ကွောငျ့ ထား လှူဒါနျးလိုသညျ့ မိဘမဲ့ကြောငျးရှိရာဆီသို့ စောစောပငျ သှားဖွဈခဲ့သညျ။ ဟိုရောကျတော့ ကလေးတှေ ပညာရေးအတှကျ အဓိကထားပွီး လှူဖွဈခဲ့သညျ။
“ကို… ထား ကို ဓာတျပုံရိုကျပေးဦး။”
“အငျး။ ကို လှလှလေး ရိုကျပေးမယျ။”
ထား သညျ ကလေးမြားနှငျ့ ပြျောပြျောရှငျရှငျပငျ ကစားနသေညျ။ ဘာမှ မသိနားမလညျသေးသညျ့ ကလေးမြားနှငျ့အပွိုငျ အပူအပငျကငျးနပေါရောလား ထားရယျ။
နလေ့ယျထမငျးစားခြိနျကတြော့ ကြောငျးထိုငျဆရာတျောက သူတို့ကိုပါ ထမငျးလာစားဖို့ချေါပမေဲ့ နောကျတဈနရော သှားရနျရှိသညျ့အတှကျ သူတို့ ငွငျးလိုကျပွီး အပွငျမှာပဲ ထမငျးစားကာ ဆေးရုံသို့ သှားလိုကျသညျ။ ဆေးရုံရောကျတော့ ကနျြးမာရေးအတှကျ လိုအပျသညျမြား ဝယျရနျနှငျ့ ဆေးရုံရှိ နှမျးပါးလူနာမြားအတှကျ လိုအပျသလို အသုံးပွုနိုငျရနျ လှူလိုကျသညျ။
မိဘမဲ့ကြောငျးရော ဆေးရုံမှာရော နှဈနရောလုံးတှငျ ထား၏ မကျြနှာသညျ ကွညျလငျလကျြရှိပွီး အငျမတနျပငျ ခြောမောလှပနပေါသညျ။
“မမေတေို့ဆီကိုတော့ မနကျဖွနျမှ ဘဏျကနပေဲ လှဲလိုကျတော့မယျ။ ကိုယျတိုငျတော့ မသှားနိုငျတော့ဘူး။”
“ထား သှားခငျြတယျဆိုရငျ ကို လိုကျပို့ပေးမယျလေ။”
“ဟငျ့အငျး။ ထား အနားမှာ ကိုရှိနတေုနျးလေး နှဈယောကျတညျး အေးအေးဆေးဆေးပဲ နခေငျြတယျ ကို။”
“ဟုတျပါပွီတဲ့ဗြာ။ ကိုလညျး ထားနှငျ့အတူ နှဈယောကျတညျးပဲ အေးအေးဆေးဆေး နခေငျြပါတယျ။”
၇ ရကျဆိုသော အခြိနျသညျ သူ့အတှကျ တိုတောငျးပွီး လြှငျမွနျစှာ ကုနျဆုံးသှားပါသညျ။ ပြျောရှငျစရာ နရေ့ကျတှကေို အတူဖွတျသနျးပွီးခြိနျမှာတော့ သူ မရောကျခငျြသညျ့ တနင်ျဂနှနေသေ့ညျ သူ့ဆီသို့ ဆိုကျဆိုကျမွိုကျမွိုကျပငျ ရောကျလာတော့သညျ။
ဟုတျသညျ။ ဒီနေ့ တနင်ျဂနှနေသေ့ညျ ထား ကှယျလှနျခဲ့သညျ့နပေ့ငျဖွဈသညျ။ မနကျ ဟငျးခကျြဖို့ မီးဖိုခနျးထဲ ဝငျတော့ ငိုနသေောထားကိုတှပွေီ့း ခြော့ရသညျ။ ဘာဖွဈလို့လဲဆိုသညျ့ အကွောငျးရငျးကိုတော့ မေးမရခဲ့။
အငိုတိတျသှားပမေဲ့လညျး ထား မကျြနှာမကောငျးပေ။ ဓားရှလို့လားဆိုသညျ့
မေးခှနျးကိုတော့ ထား မဖွဘေဲ ရယျသညျ။
“ဓားရှတာလေးနဲ့တော့ ငိုစရာလား ကိုရယျ။”
“အဲ့ဒါဆို ဘာလို့ငိုနတောလဲ ထား။”
ဘုနျးကွီးမြား ဆှမျးခံကွှပွီဖွဈသောကွောငျ့ စကားစပွတျသှားခဲ့သညျ။
“ကို… ထား နှငျ့အတူ အခနျးထဲ ခဏလိုကျခဲ့ပါလား”
Related article>>> ပွနျဆုံဖွဈခဲ့ရငျ…. (အပိုငျး – ၂)
အိမျပျေါပွနျရောကျရောကျခငျြးမှာပငျ ထား သညျ အခနျးထဲလိုကျဖို့ သူ့ကို ပွောပွီး အခနျးထဲ ဝငျသှားသညျ။ ထား တဈခုခု ဖွဈနပွေီဖွဈကွောငျးလညျး သူသတိထားမိသညျ။ ဟိုကိစ်စသိသှားတာလားဆိုတာလညျး စဉျးစားမိသညျ။ သို့သျော မသိနိုငျလောကျပါပေ။
“ကို… ထားပွောတာ သခြောနားထောငျနျော။ အခုတော့ ကုတငျပျေါမှာ ခဏလာလှဲ။ ထား ကို့ရငျခှငျထဲမှာ ခဏခိုဝငျခငျြလို့။ နောကျဆုံးအဖွဈပေါ့ ကိုရယျ။”
“ထား ဘာတှပွေောနတောလဲဆိုတာ ကို နားမလညျဘူး။”
ပါးစပျကပွောရငျး လူကတော့ ထား ပွောသညျ့အတိုငျး ကုတငျပျေါဝငျလှဲ လိုကျပါသညျ။
“ရူးခငျြယောငျဆောငျပွီး ထား ကို မကှယျဝှကျထားပါနဲ့ ကို။ ဒီကိစ်စတှေ အားလုံးကို ထား သိပါတယျ။”
“ဟိုနကေ့ ဗီရိုရှငျးရငျးနဲ့ အမှတျမထငျ ကို့ ဒိုငျယာရီ စာအုပျကို ဖတျမိလို့ သိသှားတယျ ကို။ ကို မသိဘဲ ဖတျမိတဲ့အတှကျတော့ ထား တောငျးပနျပါတယျ။”
“ဆောရီးပါထားရယျ…။ ထားကို ဘယျလောကျထိ ခဈြတယျဆိုတဲ့အကွောငျး ကို ပွောခငျြသေးလို့ပါ။”
“ကိုလုပျခဲ့တာတှေ အားလုံးအတှကျ ထား ကြေးဇူးတငျပါတယျ။ ထား သရေမှာ မကွောကျပါဘူး။ ကိုနဲ့ ခှဲရမှာပဲကွောကျတာ။”
“ခှဲရလညျး ခဏပေါ့ထားရယျ။ ကို့ကို ခဏပဲစောငျ့နျော။ ထား နောကျက ကို လိုကျလာခဲ့မှာပါ။”
“မိုကျရူးရဲဆနျတဲ့ သတျသခွေငျးမြိုးတော့ ကို မလုပျရဘူးနျော။ ထား ထကျ နိုငျငံတျောက ပိုအရေးကွီးပါတယျ ကို။ ထား မရှိတော့တဲ့အခြိနျမှာ နိုငျငံတျောအတှကျကို ပိုပွီး အခြိနျပေးပါ။ ကို့ကို သဘောကတြဲ့ မိနျးကလေးပျေါလာခဲ့ရငျ လကျထပျလိုကျပွီး တဈအိုးတဈအိမျထူထောငျပါ။ ထား သဘောတူပါတယျ။ ကို့ကို ပွုစုပေးနိုငျမယျ့ မိနျးကလေးတဈယောကျတော့ မဖွဈမနေ လိုအပျတယျ ကိုရဲ့။”
“ထားရယျ… ထား ပွောသမြှအားလုံးလိုကျနာဖို့ ကို ကတိပေးပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ နောကျအိမျထောငျတော့ မပွုပါရစနေဲ့။ ကို့ နှလုံးသားထဲမှာ ထား က ဆကျလကျရှငျသနျနမှောပါ။”
“ထား ယုံပါတယျ ကို ရယျ။ နောကျပွီး ကောငျးကောငျးနခေဲ့နျော။ ကို့ကို နိုငျငံတျောက လိုအပျနသေေးတယျဆိုတာ ကို ဘယျတော့မှ မမနေဲ့နျော။”
“စိတျခပြါကှယျ။”“အဲ့ဒါဆို ထား ကိုစောငျခွုံပေးခဲ့ပွီး ကို ထှကျတော့နျော။ ထား ခဏ အိပျလိုကျဦးမယျ။”
ထား ရဲ့ အိပျစကျခွငျးကို သူ အနှောငျ့အယှကျ မပွုခငျြတော့သောကွောငျ့ သူ ခေါငျးညိမျ့ပွကာ စောငျခွုံပေးလိုကျသညျ။ လူကတော့ အပွငျမထှကျဘဲ ထား နားမှာပဲ ဆကျထိုငျနလေိုကျသညျ။ သူ အပွငျရောကျနတေုနျး ထား ကှယျလှနျသှားခဲ့ ရငျဆိုသညျ့ အသိစိတျက သူ့ကို ခွောကျလှနျ့လို့နပေါသညျ။
ထားသညျ အသကျကို ဖွေးညှငျးစှာ ရှုရှိုကျနကွေောငျး ထား ၏ နိမျ့ခညျြမွငျ့ခညျြ ဖွဈနသေော ရငျအစုံကို ကွညျ့ရငျး သိသာနိုငျပါတယျ။ မကျြလုံးမြားကတော့ မှိတျထားပါသညျ။
ကွညျ့နရေငျး ကွညျ့နရေငျးဖွငျ့ပငျ ထား လကျခြောငျးလေးမြား၊ ခွခြေောငျး လေးမြားမှ သှေးတို့သညျ နောကျပွနျဆုတျသှားကာ တဖွေးဖွေး ဖွူလာသညျ။ ထို့နောကျတှငျတော့ ထား ၏ ရငျအစုံသညျ လုံးဝရပျသှားပါတော့သညျ။ မကျြနှာလေးသညျကား ပကတိ အိပျနသေညျ့အတိုငျးပငျ။
ထား နှုတျခမျးတို့သညျကား အနညျးငယျ ပွုံးနသေယောငျပဲ ရှိသေးသညျဟုထငျရသညျ။ထားကို သဂွိုဟျသညျ့နကေ့ သူငယျခငျြးတှေ လူကွီး မိဘတှရှေမှေ့ာ သူမငိုမိအောငျ အားတငျးထားရပါသညျ။ အားလုံးက ငိုခလြိုကျဖို့ပွောနပေမေဲ့လညျး သူ မငိုမိ။ ထား သညျ သူ့နှလုံးသားထဲမှာ ရှငျသနျနဦေးမှာလေ။ သူ ငိုဖို့မှမလိုအပျတာ ဆိုပွီး အားတငျးပါသညျ။ လကျသီးကိုတော့ ကဈြကဈြပါအောငျ ဆုပျထားပါသညျ။
Related article>>>ပွနျဆုံဖွဈခဲ့ရငျ… (အပိုငျး -၁၂)
ဘယျသူဘာထငျထငျ သူဂရုမစိုကျပါ။ ခဈြသူဘဝမှာရော၊ အကွငျလငျမယားဘဝမှာပါ သူ့ကို မိခငျတဈယောကျလို ဂရုစိုကျ ပွုစုယုယပေးခဲ့တဲ့ ကြေးဇူးတှအေတှကျ၊ သူ
လုပျခဲ့တဲ့ အမှားတှအေတှကျ ထားရဲ့ ရုပျအလောငျးကို သူ ထိုငျကနျတော့မိခဲ့သညျ။ ဘယျသူဘာပွောပွော သူဂရုမစိုကျနိုငျတော့ပါ။
ထားကို မီးသဂွိုဟျခြိနျမှာတော့ အဆောငျအပွငျကို သူ ထှကျထိုငျနမေိသညျ။ ခဏနတေော့ မီးခိုးခေါငျတိုငျမှ ထား အငှအေ့သကျမြားသညျ မိုးကောငျးကငျသို့ မွငျ့တကျသှားသညျကို သူတှလေို့ကျရတော့ လကျပွကာ နှုတျဆကျစကား ဆိုလိုကျသညျ။
“သှားနှငျ့တော့ ထား ရယျ။ ကို သိပျမကွာခငျ ထား နောကျလိုကျလာခဲ့ပါမယျ။ ကို တို့တှေ နောကျဘုံဘဝတဈခုမှာ ပွနျဆုံပွီး နောကျထပျတဈခါ ခဈြကွရအောငျ နျော။ ကိုတို့တှေ ပွနျဆုံဖွဈခဲ့ကွရငျပေါ့ အခဈြရယျ….”
Tags: #romance, Fiction Series, Fun, love, Supernatural
Nilar March 11, 2019